Sunday June 30, 2019 - 09:44:04 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo khasaara badan dhaliyay oo ciidamada Xabashida Itoobiya saacadihii lasoo dhaafay lagula beegsday deegaanno katirsan gobolka Baay.
Wararka ka imaanaya degmada Bardaale ayaa sheegaya in qaraxyo is xigxigay ay qabsadeen ciidamo Itoobiyaan ah xilli ay ku socdaalayeen wadada xiriirisa Awdiinlle iyo Bardaale.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxa koobaad oo ka dhashay Miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari Uuraal ah oo uu rakibnaa qoriga Zuugga, gabi ahaanba waxaa burburay gaariga qaraxu beegsaday.
Ciidamada Itoobiyaanka ee qaraxa koowaad ku dhintay ayaa tiradooda lagu sheegay 11 askari mana jirin askari bad qaba oo aan qaraxa wax ku noqon ,dhammaan ciidamadii gaariga la socday ayaa noqday kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay.
Saacad kadib markii qaraxa koowaad uu dhacay ayaa qarax labaad lala helay ciidamada Itoobiya xilli ay ku socdaalayeen inta u dhaxaysa magaalada Baydhabo iyo deegaanka Awdiinlle, wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Itoobiya oo wata Meydad iyo dhaawacyo ay ku hoyanayaan wadada lagu qarxiyay.
Dhinaca kale wararka laga helayo deegaanka Zabiid ee duleedka degmada Afgooye ayaa sheegaya in dagaal culus uu galabta halkaas ka dhacay, dagaalka ayaa yimid kadib markii xoogaga Al Shabaab ay wadada ugaleen maleeshiyaad Bangaraaf ah oo isku dayay in ay dhaq dhaqaaq sameeyaan.
Weerar kale oo ka dhacay tuulada Ceel Siliindi ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa lagu tababaray saldhigga ciidamada Turkiga ee magaalada Muqdisho